avylavitra · Desambra 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Desambra 2012
Azia Afovoany sy Kaokazy 15 Desambra 2012
Afghanistan no heverina ho ny firenena faran'izay mpanao kolikoly indrindra eto an-tany tao anatin'ny fanadihadiana isan-taona nataon'ny mpanaramaso ny kolikoly eran-tany. Niteraka andianà famoriam-bahoaka hanoherana ny kolikoly nanerana ity firenena rotiky ny ady ity ny famoahana ilay fanadihadiana. Tao Bamyan, ireo mpikatroka mafàna fo avy amin'ny fiarahamonina sivily ao amin'ny faritanin'i Bamyan (aka Bamiyan) dia nanolotra sary famantarana iray maneho ny filoha Afgana Hamid Karzai miaraka amin'ny 'Amboaran'ny Firenena Mpanao Kolikoly Indrindra'.
Azia Atsinanana 15 Desambra 2012
Azia Atsinanana 14 Desambra 2012
Ny Pitak Siam (Arovy i Thailand), vondrona manohitra ny governemanta, dia nivoady ny hanetsika olona iray tapitrisa ho eny an-dalamben'i Bangkok tamin'ny 24 Novambra teo, saingy tsy nahavita namory afa-tsy 20.000. Samy nanoratra momba ilay tsy fahombiazan'ny Pitak Siam daholo ireo bilaogera, mpanao gazety sy ny eny amin'ny anjerimanontolo, ary ny fiantraka ara-politikan'ilay hetsi-panoherana.